StartFAQSomaliIn akoon la furto/In bangiga qofka la yahay loo caddeeyo
Haddii aadan heysan haba yaraatee wax baasaboor ah ama waraaq aqoonsi ah waa in bangigu uu sidaas oo ay tahay koontaroolaa qofka aad tihid. Haddii aadan heysan waraaq aqoonsi oo shaqeyneysa wuxuu bangigu aqoonsigaaga ku hubinayaa dukumiinti kale oo lagu kalsoonaan karo iyo koontaroollo kale. Waxa ay taasi ka dhigantahay maaha wax go’an ee waxay noqon karaan waxyaabo kala duduwan xaaladba xaalad, waxay ku xirantahay sida uu bangigu u arko khatarta uu kalyantiga cusubi uga dhiganyahay. La hadal bangiga iyagaa markaas ku siin kara talooyine. Haddii aadan heshiinnina oo laguu diido akoon-bangi waxaad u gudbi kartaa Guddiga Guud ee Ashtakooyinka (Allmänna Reklamationsnämnden) oo arrinkaaga si lacag la’aan ah u eegaya.